आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडी कन्चनले लेखेका थिए अनिशालाई यस्तो अन्तिम पत्र, परिवारले गरे सार्बजनिक (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
January 12, 2021 AdminLeaveaComment on आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडी कन्चनले लेखेका थिए अनिशालाई यस्तो अन्तिम पत्र, परिवारले गरे सार्बजनिक (भिडियो सहित)
चितवनका कन्चन तिमल्सिना र अनिशा कुमालको प्रेम प्रशंगले यतिबेला निक्कै चर्चा बटुलेको छ । कारण उनीहरुले काठमाडौँमा गएर विवाह गरेपछि अनिशा आफ्नै घर फर्किएपछी कन्चनले वि’ष पिएर आ’त्मह’त्या गर्ने प्रयास गरेका छन् । विवाह गरेर पुन: घर फर्किएकी अनिशा यस विषयमा स्पष्ट पार्न मिडियामा आएकी छन । अनिशाका अनुसार उनीहरुको चिनजान फेसबुक मार्फत भएको थियो ।
विस्तारै उनीहरुको फेसबुक मै मायाको कुरा भएको स्विकारिन । तर अनिशाले विवाह नै गर्ने भनेर स्वीकार नगरेको बताइन । कन्चनले काठमाडौँ लगेर जवर्जस्ती सिन्दुर लगाईदिएको समेत उनले बताइन । अनिशाको परिवारले छुट्टाईदिने भन्दै कन्चनले जबर्जस्ति सिन्दुर लगाई दिएको परिवारले पनि आ’रोप लगाएका छन ।
कन्चनले जवर्जस्ती सिन्दुर लगाएको फोटो खिचे पछि मात्र घर पुर्याईदिने भने पछी आफुले त्यसो गरेको अनिशाले बताइन । तर यता कन्चनका परिवारको भने अर्कै दावी रहेको छ । कन्चनका आमाका अनुसार अनिशाले धोका दिए पछि आफ्नो छोराले आ’त्मह’त्या गर्ने कोशिस गरेको हो । अहिले कन्चनको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
उनको अझै सम्म होस् नआएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । यसै बीच कन्चन र अनिशाबीच भएको फेसबुक म्यासेजको कुराकानी सार्बजनिक भएको छ । यसै बीच कन्चनले आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडी कन्चनको नामा लेखेको भावुक पत्र सार्बजनिक भएको छ । उक्त पत्र कन्चन कै परिवारले सार्बजनिक गरेका हुन् । कन्चनले आ’त्मह’त्या गर्नु अगाडी कन्चनले लेखेको हेर्न यहा जानुहोस
अब ड्राइभिङ लाइसेन्सको ट्रायलमा पुरै पास नहुदा पनि लाइसेन्स पाइने, ६० प्रतिशत अंक ल्याए पुग्ने…..
बिदेशमा कमाएको सारा सम्पत्ति लिएर माइजू यसरी आफ्नै भान्जासग भागिन् ,मामा रुदै मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
१२ पढ्ने युवतीको जिन्दगी ब’र्वाद पारेर यसरी फ’रार भए युवा, रुँदै गुहार माग्न आइन् मिडियामा ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)